Doorashada kuraasta ugu dambeysa xildhibaanada labada Aqal oo maanta ka dhaceysa Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Doorashada kuraasta ugu dambeysa xildhibaanada labada Aqal oo maanta ka dhaceysa Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa in xarunta gaadiidka booliska degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada xildhibaanadii ugu danbeeyay labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada maanta dhaceeysa ayaa qorshaheedu yahay in la doorto 4-ta xildhibaan oo labo ka mid ah ay yihiin Aqalka Sare halka labada kale ay yihiin Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ilaa 10 musharaxiin ayaa la sheegayaa inay ku tartami doonaan afarta kursi ee maanta doorashadoodu dhici doonta.
Maalinta Sabtida oo ay taariikhda ku beegan tahay 21-ka bishaan ayaa lagu wadaa in musharixiinta isku soo taagay xilka guddoonka Aqalka sare ee baarlamaanka ay khudbadooda soo jeediyaan, iyadoona maalinta xigtane ay dhici doonto doorashada.
Dhinaca kale, guddiga doorashada ayaa lagu wadaa inay maanta soo gaba-gabeeyaan doorashada xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka, taas oo muddooyinkii ugu dambeysay ka socotay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa guddiga looga fadhiyaa xal u helida 5-ta xildhibaan oo sharci ahaantood ay weli isku heystaan beesha caalamka iyo madaxda madasha qaran, waxaana hadii xal loo helo ay noqonaysaa inay soo dhameystirmeen xildhibaanada Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, bisha soo socota Febraayo horaanteeda ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxaana tartanka doorashadaasi ku tartami doonna musharixiin aad u badan oo la sheegay in qaarkood ay doorashadaasi ugu cad-cad yihiin.